यस्तो छ तितो करेलाको मिठो फाइदा - Nepal Insider
January 19, 2020 233
काठमाडौं – हाम्रो करेसाबारीमा पाइने करेला निकै फाइदाजनक तरकारी हो । खाँदा तितो भएपनि करेलाको स्वाद निकै मिठो हुन्छ । करेला तितो हुनाले धेरैलाई मननपर्न सक्छ । तर तितो करेलाले हाम्रो शरिरमा लाग्ने बिभिन्न रोगहरुबाट बचाउछ ।
करेलालाई महत्त्वपूर्ण औषधिको रुपमा पनि मानिन्छ । करेलाको सेबनले दमको समस्या समाधान गर्छ । दमको समस्या भएकाहरुले करेलाको तरकारीमा मसला नहाली खानु राम्रो हुन्छ । त्यस्तै करेलाको सेबनले कलेजोसम्बन्धी समस्या पनि समाधान हुन्छ । यदी बान्ता आउने वा हैजाको समस्या भएमा करेलाको रसमा थोरै पानी र कालो नुन छरेर खाएमा ठिक हुन्छ । यसको सेबनले हाम्रो पाचन शक्ति मजबुद बनाउछ ।
डायबेटिजको समस्या भएकाहरूका लागि करेलाको तरकारी खानु राम्रो मानिन्छ । बाथ रोगको समस्या भएकाहरुले काँचो करेलाको झोलले मालिस गरेमा राम्रो हुन्छ । यसको सेबन गर्नाले हेमोग्लोबिनको मात्रा बढाउछ । यसको सेबनले भोक पनि मेटाउछ ।
हाम्रो करेसाबारीमा पाइने करेला निकै फाइदाजनक तरकारी हो । खाँदा तितो भएपनि करेलाको स्वाद निकै मिठो हुन्छ । करेला तितो हुनाले धेरैलाई मननपर्न सक्छ । तर तितो करेलाले हाम्रो शरिरमा लाग्ने बिभिन्न रोगहरुबाट बचाउछ ।
Prevपशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरी एक सेयर गर्दै भेटी चढाएर माघ ६ गते सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस्, पशुपतिनाथले सबैको रक्षा गरुन्
Nextयिनै हुन् रवि लामिछानेलाइ सफाइ दिने चितवनका मुख्य न्यायाधीश हेमन्त रावल
सानेपा प्रकरणमा कसैले नसोचेको बास्तबिकता बाहिरियो, सबिता माताले गरिन यस्तो भबिस्यबाणी(भिडियो हेर्नुहोस)
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (39359)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (12564)
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका यी पुरुष गर्भवती भएको रिपोर्ट आएपछि (9198)
भोली देशभर सार्वजनिक विदा (6484)
अष्ट्रेलिया काण्डको नालिवेली, को हुन् ति युवती ? जान्नुहोस वास्तविकता ! (5188)